☺ ငြိမ်းဇေဦး : 04/01/2008 - 05/01/2008
ဒီည ငါကြယ်တွေကို ထိုင်ကြည့်မိတယ်
ပြီးတော့ ရုတ်တရက် ကိုကို့ ကိုမုန်းတယ်တဲ့.....
စားသော်လည်း အရသာမခံနဲ့ …။
ငါ့ဆန္ဒတွေ ဖိုင်တွဲ လို့
မေ့နိုင်မယ် ထင်သတဲ့လား… ။
ခွဲရက်တဲ့နှုတ်ခမ်းက အနမ်းတွေနဲ့ပြောခဲ့ပြန်….။
ဘေးနားမခွာ မေတ္တာနဲ့ မျှယူ
အိပ်မယ်ဆို မျက်လုံးမှိတ် ငါ့အရိပ်ကိုမင်းတွေ့တဲ့အခါ
နာကျင်ကြေကွဲ အဲဒီ အသည်းဟာ
“စစ် စစ် ”
(ရင်ဝထိုးသွားမှာလဲလန့် တော့လန့် ရတယ် )
“ မြို့ အပြန် မျိုးစေ့”
ကမ္ဘာကြီးရယ် ချစ်သူတည်ရှိဖို့ အတွက်
ခုတော့ ရင်ဘတ်ကြီး ဟဟပြီး
ပူနွေးမှုတွေနဲ့ မျက်နှာသစ်ဖြစ်ခဲ့....။
ငယ်ငယ် (သို့) မပြောဖြစ်တဲ့အသံတွေရဲ့ ပဲ့တင်လှိုင်းများ ...(အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်)
ကျနော် မနက်ခင်းတွေမှာ မနိုးနိုင်ခဲ့သည်မှာ တော်တော်တော့ကြာခဲ့ပြီ…. ညတွေ အိပ်မရခဲ့…။
ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးကို ကျနော် ပြန်သိမ်းထားသင့်ခဲ့သည်… သို့သော် ကျနော်သိမ်းမထားခဲ့…။
ဖြူလွလွ ကိုယ်သုတ် သဘက်လေးတစ်ထည်ကို ကျနော်တသက်လုံးသုံးမည်မဟုတ်သလို လျှော်ဖွတ်မည်လည်းမဟုတ် ကျနော်ရုတ်တရက်သေရမည်ဆိုခဲ့လျှင်လည်း ကျနော့်သေဆုံးမှုကို ကျနော်
ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါလျှင် ခေါင်းအုံးလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်လျှက် သဘက်ဖြူလေးလွှမ်းပြီး မလဲဖြစ်သော အိပ်ယာခင်းလေးဖြင့်ကျနော့်အလောင်းကို ပတ်ကာ မီးရှို့ သဂြိ င်္ုလ်ခွင့်အတွက် ကျနော်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါလိမ့်မည်….။
သူက ကျနော့်ကို ကိုကို.. ဟု ခေါ်သည်…။
ကျနော်ကသူ့ကို သူငယ်ချင်းလိုချစ်သည်… ။
အရာရာသော လောကဓံ အခက်အခဲ တိုက်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုလျှင် ကျောခြင်းကပ်ယုံကြည်မှုမျိုးဖြင့် ချစ် မြတ်နိုး သည်…။
ကျနော်က ဆံပင်ရှည်ရှည် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဖရိုဖရဲ နုံချာချာ ကပိုကရို ရှင်သန်သည့် လူတယောက်ဖြစ်သည်။
သူက သန့်ရှင်းမွှေးပျံ့သပ်ယပ်လှပချောမော စည်းစနစ်ကျလွန်းသည့်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သည်..။
ကျနော်သူ့အကြောင်းလေးများတွေးတိုင်း လူပျိုပေါက်ကလေးတယောက်လို ရင်ခုန်၏ တပြိုင်နက်ထဲလည်း
သူ့မျက်နှာနုနုလေးသည် ကျနော့်အာရုံတွင် ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ထားသကဲ့သို့ ထင်းထင်း ထင်ရှားစိုးမိုးမြဲဖြစ်၏။
ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ထားသည်နှင့်ကွဲပြားသည့်အချက် ကတော့ ငယ်ငယ့် တက်ကြွ ဖျတ်လတ် ယုံကြည် အားပါ
သည့် လှုပ်ရှား ပြောဆို ရယ်မော ငြင်းခုံ မှုလေးများ… ကျနော့်ကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း စကားပြောတတ်သည့်မျက်လုံးလေးများ ကျနော်နှင့်တူတူ ကျနော့်ရင်ခွင်တွင် အပူအပင်မဲ့ ပျော်ရွှင်တတ်မှုများ…
ကျနော်၏ အချိုးမပြေ အဆီအငေါ် မတည့်မှုများနှင့် စည်းကမ်းမဲ့နေတတ်စားတတ်မှုများကို မိခင်သဖွယ် ဆူတတ်ပြီး တပြိုင်နက်ထဲ ခွင့်လွှတ်တတ်သင်ကြားတတ်သည့် အသံလေးများ ဟန်လေးများ…….။
ညတို့သည် လိုအပ်သည်ထက် ကျနော့်အတွက်မှောင်လွန်းလှ၏…။
ကျနော် ကောင်းကင်ကိုမော့မကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ တော်တော်တော့ကြာခဲ့ပြီဖြစ်၏…..။
ဘ၀သည် အကွေ့အကောက် အလှည့်အပြောင်း အနိမ့်အမြင့် တဆစ်ချိုးများ ဖြင့် မပြေပြစ်မချောမွေ့သော သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်၏ ၊ ထိုသဘာဝဖြစ်စဉ်ထဲတွင် ကျနော် သည် ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် တာဝန်ယူ၍ ကျနော့်ငရဲ ကျနော့် နိဗ္ဗာန် တို့အား အခါအားလျော်စွာ ကျနော့် ဟာ ကျနော် ဖန်တီး ခိုလှုံ၏ သို့မဟုတ် ကျနော့်ဟာကျနော် နှစ်မြှုပ်လောင်ကျွမ်း၏….။
ထိုလောင်ကျွမ်းမှု ထို နစ်မြှုပ်မှုများအား ငြိမ်းသတ် ကယ်ဆယ်မြဲ ဖြစ်သည့် သူသည် တကယ်တော့ ကျနော် မမျှော်လင့်သော သိမ်မွေ့နူးညံ့သည့် နတ်ဒေ၀တာ တပါးအဖြစ် ကျနော့်ဘ၀တွင် အမြဲရှိနေခဲ့၏။ ကျနော့် နိဗ္ဗာန်တို့အား အမှန်တကယ်တန်းဖန်ဆင်းရှင် သည်ကား သူသာလျှင်ဖြစ်၏။
ကောင်လေးတယောက်အကြောင်း ကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည် ။
ရေးလက်စ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်များ အား လက်စသတ်မည်ကြံရင်း ထပ်မံရေးဖြစ်သော အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါသည်။
အားထုတ်မှု တစ်အောင်စနဲ့ နောင်တ တွေ ဖဲ့ဖဲ့ ငုံ နေတာ
လွှသမား ဆေးငုံသလို လေ
ဖီကနဲဖန်ကနဲ ထွေးထွေးချလိုက်ပြန်တော့
ဖြစ်သလို အရသာခံတတ်မှုနဲ့
ကြုံရာ ဖြစ်သလို နေတတ်မှုတွေနဲ့
Being... By Nyein Zay Oo (Oil)
By Nyein Zay Oo (OIL)
သားမြတ်ထွားထွား မာရ်နတ်နဲ့ ဇိမ်ယူ
ဒါကိုလဲ လူသားတွေက ဖန်ဆင်းတယ် အချစ်ရေ............။
မ က ရ တဲ့ ပွဲ
ခြွေမယ် တကဲကဲ …။
လျော့တိလျော့ရဲ ၀ဲ ကနဲ ……….။
အချိုလွန်ပျားရည် မဟုတ်ဘူး လေ..။
ညတွေ မှာ ကြိတ်ငိုရင်း
ခပ်တင်းတင်း ကိုက်ခံဖို့ မဟုတ်ဘူးလေ...။
by Nyein Zay Oo (water colour)
life by Nyein Zay Oo
အာခိမိဒိ နိယာမ ကို
ငါတို့ သတိမရကြဘူး ။
ဟန်ချက် မှန် စီးဆင်း
အသက်ရှူ သံ မျှင်းမျှင်းနဲ့
အာနာ ပါ န ကို သတိမရကြဘူး။
တူ ၊ တူမ ........။
“ဇွန်ပန်းရုံ အနီး လှည်းဘီးကျွံနေသည်
ကူ၍ တွန်းပေးကြပါ ။
ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့ နိုင်ပါသည် ။”
ငါ့တူ စာ ဖတ်
ညွှတ်ကွင်းမျှော် ဇွတ်…. ။
တောင်ပေါ်က ခုန်ချလာတဲ့ စမ်းချောင်းက
သူ့မျက်ရည်တောင်သူမစိုပဲ ခြောက်သွေ့ ဦးမယ်တဲ့…။
ညရဲ့ လ ဟာ
ဝေ့၀ဲနေတဲ့ သစ်ပင်ဖျားတွေပါ လမင်းရယ် ….
တောင်တန်းတွေက မော့ ပြော
ပြီးတော့ တောင်တန်းတွေ သမ်းဝေ
လဟာ ညကို ဥပေက္ခာပြုသွားပြီပေါ့…။
သူ့ ဒိုင်ယာယီ သူဆွဲဖွင့်လို့
မခို့ တယို့ တိမ်း သင်္ကြန်ယိမ်းကဖို့ပြင်ပြီ….။
ဟန်ပြင် နေတဲ့ ကျားရိုင်းလို
ူ ကာဘွန် နဲ့ ဆွဲပါသည်
Professional Camera တစ်လုံး ပြန်ဝယ်နိုင်လောက်သည့်အချိန်တွင် ဓါတ်ပုံများ တင်ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ (အခိုးခံလိုက်ရလို့ဗျာ)